Munamato weMutongi Akarurama. ? Chechi yeKaturike uye yeMunhu
Namata kuna Mutongi Akarurama Ndihwo hwunotumidzirwa kunaIshe Jesu Kristu mutongi wedu mumwechete pamberi paMwari Baba.
Zvakakosha kuziva kuti minamato inofanirwa kuitwa nekutenda.
Izwi raIshe rinotidzidzisa kuti kana tikamutsvaga tinofanirwa kutenda kuti anozotiteerera uye ichi ndicho chakavanzika chezvinhu izvi zvese, kuti titende.
Pasina kutenda the minamato iwo anongova mazwi asina chinhu asingasviki chero hunyanzvi uye haaazadzisa chinangwa chaakagadzirwa.
Kune zvese izvi zvakafanira kuziva kuti ndezvipi zvikonzero zvikuru zvinoita kuti tinamate, vanhu vazhinji vanobvunza mutongi akarurama chete asi kwete zvichibva pamoyo uye ipapo munamato unobva watadza kushanda.
1 Chii chinonzi Munamato weMutongi Akarurama?
1.1 Munamato wemutongi wekutanga weKatorike
1.2 Munamato kumutongi akangwara wevarume
1.3 Munamato ingotonga kuti usunungure musungwa
1.4 Munamato wemutongi angotonga nyaya dzakaoma
2 Ndirini pandingaite minamato?
Chii chinonzi Munamato weMutongi Akarurama?
Mr. Jesucristo Iye ishamwari yedu, hama uye Mutongi wedu Akarurama.
Anokumbirwa zvinhu zvakawanda uye chimwe chezvikumbiro zvakajairika ndechekudzivirira isu nemhuri dzedu.
MaKristu mazhinji anoita munamato uyu mazuva ese uye izvi zvinofanirwa kuve zvakadaro nekuti zuva rega rega zvakaipa zviri kudzika uye nguva dzose kubva pamba nekudzivirirwa kweMutongi Akarurama nezveumwe neumwe wedu.
Uyu ndiwo munamato unoitwa kubva pamoyo kubva zvatinoisa mumaoko ako chinhu chepedyo kwazvo chatinacho chinogara chiri vana vedu uye mhuri muhukama.
Ita munamato uyu usati watanga rwendo rwezuva nezuva, nemhuri yese pakudya kwekuseni Ipfungwa yakanaka kwazvo sezvo isu tichikurudzirawo kuita kwekubatana mumhuri uye kuzadzisa zvinotaurwa neshoko reE die soque kana vaviri kana vatatu vakabvuma ndokumbira kuna Baba pachinzvimbo chaJesu iye achapa izvo zvikumbiro kubva kudenga.
Munamato wemutongi wekutanga weKatorike
Oh Divine uye Rakarurama Mutongi kuti unotambanudza ruoko rwako kune varombo nevapfumi!
Asingade munhu anokanganwira uye nerudo, mwenje wemweya unovhenekera nzira dzakasviba, Shoko rehupenyu nerudo rwakadzama, Kudzidzisa uye ufakazi hunotidyisa nemunamato.
Iwe iwe wakatambura kushungurudzwa kwakanyanya uye kunyadziswa, Kuti kuve Mutsvene uye akachena akagashirwa nekuzvininipisa kuranga kwakanyanya, Iwe iwe, uri mambo wamambo, unogara uye unotonga pamusoro pezvese zvakaipa nevanhu vese, unogashira usingagunun'uni kana kunyomba zvakanyanya zvinorwadza zvinorwadza, Uye iwe wakapa zvese kuti tiponeswe, Dai isu munyengetero uye chikumbiro chedu chiuya kwauri.
Madhimoni uye akagarwa newe akatiza nesimba remunamato wako, Wakasimudza varwere pamibhedha yavo, Ukaporesa mapofu kubva paupofu hwavo, Unodzosera hutano kune vane maperembudzi, Iwe wakapa hupenyu nechingwa kune vakakutevera.
Makawanza hove uye zvingwa kuti mupe kuvanhu, Makavhura mvura uye mukafamba mukati mavo, Makapa masikati nousiku, Runyararo nekuwirirana, Imi Mutongi wedu Akarurama musingazeze kuperekedza vanhu venyu, Pasina magumo munopa zvese, Uye unozadzisa vimbiso yako, Kana munhu akazvipira akauya kwauri, Iwe usinga nyadzise kana kutengesa, Iwe haugumbure kana kukuvadza, Unotidzidzisa nemifananidzo, Unosiya nhaka isingaperi muMagwaro Matsvene, Iwe teerera kumunamato wedu uye unouya kutifarira.
Munamato inogara iri nzira yekusimudza, mukuwedzera kune zvatinokumbira, kurumbidza kwedu nekutenda kuna Mwari uyo anotipa isu nevemumhuri medzi kuchengetedza zuva rega rega renyika.
Mukuita munamato uyo isu tinoziva uye tinotenda kuti dziviriro youmwari inoenda pamberi pedu mune zvese zvatinoita zuva iro.
Chechi yeKatorike ine mufananidzo wekunyengetera kune wekutanga Mutongi, mune uyu muenzaniso wemunamato tinoona kuti tinotanga nekuziva zvese hunhu hwaJesu Kristu tobva taita chikumbiro uye nekupedzisira nekutenda tendero yatakapiwa, iyo yekupedzisira sechiitiko chekutenda ichivimba Chishamiso chakatoitwa.
Munamato kumutongi akangwara wevarume
Zvikara zvinondirova, Shumba dzinoomba mukati mangu, Zvakaipa zvinokundika parutivi rwangu, ndinonzwa kutya uye kurwadziwa. Ini handichagona kufamba, ndinotya kusaruramisira,
Vadzivisi vangu vanonyomba, Ivo vanotenda kuti vane simba, uye kunyangweangu wandave kutya achionekwa, Kune mumwe munhu Wekumusoro-soro, Iye anouya kuzondibatsira.
Ingotonga, huya, kurumidza kuuya kwandiri, Dzinga zvakaipa zvese, Vamwe varume vanondirwisa uye vandirwadzise, ​​Just Judge, huya, kurumidza kuuya kwandiri.
Ini ndinopopota uye ndinotsvaga huvepo hwenyu muhupenyu hwangu, ini ndiri munhu asina kusimba, ndinokutsvakai uye handikuwane imi, Huyai muuye Mutongi Wangu Anodiwa.
Dai huroyi nehuipi, Iyo yemidzimu uye santeria, Dai dhiabhori nemutadzi, Gadzirira musoro wako, Enda kure nerutivi rwangu, Bvisa nekukasira, Just Judge awuye kuzondibatsira, ndinokukumbira ndapota.
Kudzikama nekugadzikana kuri kuuya, Varume vanototenda uye vanopa zita renyu dzvene, Ndatenda, ini ndinokupai Mutongi wangu Akarurama, Ndokutendai nekusingaperi, Hareruya, Ameni.
Munamato uyu chaiwo uripo nekuda kweiwo degree remhirizhonga iri kuitika munguva dzichangopfuura, zvakanyanya kuoma kuburuka mumugwagwa pazuva chero ripi zvaro uye usingawone nharaunda izere nemasimba akashata.
Ndokusaka munamato uyu wakakosha sezvo tichibvunza iye Mutongi Akarurama kuti aunze rugare nerunyararo mumoyo wemunhu kuti mhirizhonga igume nenzira iyi.
Mwoyo wakanaka chete waJesu Kristu unogona kushandura mwoyo kuva wakanaka uye zvido zvakanaka kuita makomborero.
Nd zvirinani kupedza kushungurudzwa nemhirizhonga pane munamato uzere nekutenda vavariro dzakanaka, pasina hudyire uye hwakagadzirwa kubva mumweya.
Munamato ingotonga kuti usunungure musungwa
Vanodiwa Ishe Jesu. Iwe wakabarwa wakasununguka.
Mweya wako wemasimbaose wakasununguka, kunyangwe muviri wako wemuviri sezviri pachena usiri.
Iye, anove huve huve huMwari hwako, ari mukati mako, anogara achiperekedzana newe.Ndinokumbira huvepo hwomweya uhu huri mauri uye ndinokumbira kuti akusunungure, iyo sununguko inoenderana nehupenyu hwese hwekurarama nekutungamirirwa nehana.
Ini ndiri mukova wakazaruka wekuti hakuna munhu anogona kuswedera padyo neni uye gonhi iro rinoendesa kurugare, kune rudo rwaMwari nemuvakidzani wako, kune zvakanaka uye mufaro wako, uchavhurika zvakanyanya uye pachena, ikozvino uye Nokusingaperi.
Uyu mutongo ingotonga wakakwana kusunungura musungwa yakasimba kwazvo.
Kurarama nguva ino yakaipa nenhengo yemhuri kana shamwari hapana mubvunzo kuti ndiyo imwe yezvakaipisisa zvaungaitika iwe.
Kune avo vakanyimwa rusununguko chiitiko chinorwadza umo nguva zhinji munamato chete ndiyo inogona kupa rugare netariro.
Mutongi Akarurama Jesu Kristu anobvunzwa kuitira kuti sarudzo dzakaitwa maererano nemutongo dziongororwe, kuti nzwisiso ivhurwe uye kuti igone kushanda kudivi Kururamisira.
Nenzira imwecheteyo, chikumbiro chinogona kuwedzerwa kukumbira runyararo uye moyo murefu, kuyedza kuita zvinotaurwa neshoko raMwari, kureverera muvakidzani wedu.
Munamato wemutongi angotonga nyaya dzakaoma
Divine uye Akarurama Mutongi wevapenyu nevakafa, zuva rekusingaperi rekururamisira, rakapinda mudumbu rakachena reMhandara Maria kwehutano hwevedzinza revanhu.
Just Judge, musiki wedenga nepasi uye akafira pamuchinjiko rudo rwangu.
Iwe, uyo wainge wakaputirwa nejira uye wakaiswa muguva rawakasimudza pazuva rechitatu, mukundi wa rufu uye kubva kugehena. Akarurama uye Mwari Mutongi, inzwai zvichemo zvangu, teererai zvandinokumbira, teererai zvandinokumbira uye muvape kutumirwa kwakanaka.
Izwi rako rakakosha rakanyaradza dutu, kuporesa varwere nekumutsa vakafa saRazaro nemwanakomana wechirikadzi yaNaimu.
Humambo hwezwi rako hwakatiza madhimoni, zvichiita kuti vasiye mitumbi yevakabatwa, uye ndokupa meso kune mapofu, taura nembeveve, inzwa matsi uyeregerera vatadzi, vakadai saMagdalene neane mitezo. kubva padziva.
Wakazviita usingaonekwe nevavengi vako, ivo vakaenda kukuvasunga vakawira pasi, uye pawakapera mweya pamuchinjiko, nzira dzakashamisika nekubvumirana kwako kune simba. Wakavhura matirongo kunaPetro ndokumubvisa maari pasina anoonekwa navarindi vaHerodhi.
Makaponesa Dimas uye mukanganwira mhombwe.
Ndinokukumbira, Mutongi chete, ndisunungure kubva kuvavengi vangu vese, vanoonekwa uye vasingaonekwi: iyo Shroud Tsvene pawanga wakaputirwa inondifukidza, mumvuri wako unoyera unondivanza, chifukidzo chakafukidza meso ako chinopofumadza avo vanonditambudza uye nevanondishuva zvakaipa, ndine maziso uye usandione tsoka dziine uye usasvike pandiri, maoko ane uye haandiedze, nzeve dziine uye hadzina kundipomera uye miromo yako ichave yakanyarara mudare kana vachiedza kundikuvadza.
Ah, Jesu Kristu Akarurama uye Mutongi Wamwari! uye tii dzakatyoka, shangu dzechisungo dzakaputswa, mapanga akapindika uye chero chombo chakanangana neni chakatyorwa chobva chashanda pasina. Kunyange mabhiza haangasviki kwandiri, kana vashori vanonditarira, kana kundiwana.
Ropa rako rinondisuka, jasi rako rinondifukidza, ruoko rwako runondikomborera, simba rako rinondivanza, muchinjiko wako unondidzivirira uye uve nhoo yangu muhupenyu uye panguva yekufa kwangu.
Oo, Tonga chete, Mwanakomana waBaba Vokusingaperi, kuti naYe uye noMweya Mutsvene uri mumwe Mwari wechokwadi!
Ah Shoko raMwari rakaitwa munhu!
Ndinokukumbira kuti undivharewo nejasi reUtatu Hutsvene kuti uve wakasununguka panjodzi dzose nekukudza zita rako dzvene.
Namata munamato wekunamata uye wakarurama wematare akaomarara nekutenda kukuru!
Jesu Kirisito, apo aive pasi pano, aive chapupu chakanangana neicho chinogona kufungwa nemunhu pfungwa, akazvinzwa mumuviri wake paakaronga kupa hupenyu hwake nekuda kwerudo rwedu.
Ndosaka pasina mumwe ari nani kupfuura iye anonzwisisa maitiro akaoma, anoziva manzwiro atinoita, zvatinofunga uye anotitungamira kuti tiite zvakanaka kuita kunyangwe zvisiri pachena panguva ino.
Iko hakuna chikumbiro chakaoma icho chisingagone kugadziriswa kubva kumunamato nekutenda kwakawanda, Mwari anogarochengeta zvipikirwa zvake.
Iwe unogona kunyengetera munamato weMutongi chero nguva yaunoda.
Iyo haina nguva, miniti, zuva revhiki kana chirongwa. Iwe unofanirwa kunyengetera kana iwe uchida uye kana iwe uine kuda nekutenda.